Rahoviana izahay no mandefa fanamarihana ara-dalàna any UAE | Law Firms Dubai
Rahoviana isika dia mandefa taratasy ara-dalàna any UAE
fanafody faran'izay haingana
handamina ny olana
Ny endri-pifandraisana mahazatra dia manaraka fandaharana na endrika efa nomanina mialoha izay tokony harahin'ny olona rehetra voakasik'izany. Ny fanamarihana ara-dalàna dia ohatra iray amin'ny fifandraisana amin'ny fomba ofisialy amin'ny endriny manokana izay mamaritra ny karazana fampahalalana ilaina atolotra ao anaty fampandrenesana sy ny tokony hanomezana azy io.
Afaka manampy ny mpisolovava UAE na matihanina matihanina
manakarama mpisolovava za-draharaha
dingana voalohany alohan'ny dingana ara-dalàna
Zava-dehibe ny hanarahanao ny format amin'ny fandrafetana sy fandefasana fanamarihana ara-dalàna. Raha vita tsara, dia afaka mampiasa vahaolana haingana indrindra ianao. Ny fanamarihana ara-dalàna dia manome antoka anao sy ny mpandray anjara dia manaiky ny fepetra momba an'io raharaha io ary tsy tokony handamina ny raharaha ao amin'ny fitsarana.
Inona no atao fanamarihana ara-dalàna?
Ity dia antontan-taratasy an-tsoratra nalefa avy amin'ny mpandefa iray manambara ny mpandray anjara momba ny finiavana hanao raharaham-pitsarana hanohitra ity farany. Ny mpandefa dia mampahafantatra ny olan'ilay mpandray anjara amin'ny alàlan'ny fanamarihana ara-dalàna. Manampy fampitandremana farany ho an'ny mpandray izany handaminana ilay olana na hiatrika ady amin'ny fitsarana.
Ny fanamarihana ara-dalàna dia tahirin-kevitra tsotra saingy mitaky fitandremana avo lenta amin'ny famelabelarany mba hampitana azy amin'ny fomba tonga lafatra. Ny mpisolovava iray ao amin'ny UAE na ny matihanina ara-dalàna dia afaka manampy amin'ny famoronana fanamarihana ara-dalàna mifototra amin'ny lalàna manan-kery ao amin'ilay tany. Ny fanamarihana ara-dalàna dia tokony hahitana ny olana tadiaviny, handinihana ny vahaolana ary ny fotoana tokony hamoahana ny olana, ary alefa amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana.
Rehefa mandefa fampandrenesana lalàna
Ny fandefasana fanamarihana ara-dalàna dia fomba tsara foana hanamarihana fa tsy mikasa ny hamerina tanteraka ilay fifandraisana ianao. Ny fanamarihana ara-dalàna tany UAE dia ny dingana voalohany alohan'ny dingana ara-dalàna. Azo alefa avy amin'ny olona na orinasa iray izay voatazona ny zony ara-dalàna na niharan'ny fahapotehana ara-dalàna mba hanomezana vahana farany ilay antoko mandray azy raha misy ny fifandirana. Ny toe-javatra sasany dia mitaky fandefasana taratasy ara-dalàna, ary tafiditra ao anatin'izany:
Fanamarihana nomen'ny mpampiasa iray amin'ny mpiasa iray noho ny fanitsakitsahana ny fe-potoana amin'ny fifanekena asa, fanararaotana ara-nofo ataon'ny mpiara-miasa, fanitsakitsahana ny politikan'ny HR, handeha tsy hiala amin'ny raharaham-panjakana, sns.
Fanamarihana avy amin'ny mpiasa mankany amin'ny mpampiasa noho ny karama na tara na tsy andoavam-bola, fanitsakitsahana ny fifanarahana momba ny asa, fampitsaharana tsy misy antony mitombina, sns.
Fanamarihana navoaka momba ny famoahana ny taratasim-bola raha misy ny fizahana fikafika.
Adihevitra mifandraika amin'ny fananana toy ny trosa sy ny fifanolanana ho an'ny tompona, fandroahana tampoka ny mponiny, sns.
Olana ao amin'ny fianakaviana toy ny fisaraham-panambadiana, fitahirizana ny zaza, na fifandirana momba ny lova, sns.
Fanamarihana ireo orinasa mpamokatra amin'ny fitarainana momba ny fanaterana vokatra tsy misy dikany na ny tolotra diso, sns.
Ny serivisy momba ny fandefasana fanamarihana ara-dalàna
Azonao atao ny manakarama mpisolovava za-draharaha iray hanampiana anao hamorona fanamarihana ara-dalàna matihanina ary hanolotra izany amin'ny fatiantoka. Ity mpisolovava ity dia hiresaka aminao momba ny toe-javatra, handinika ny zava-misy rehetra ary hanoro hevitra anao momba ny fiantraikany ara-dalàna rehetra, ary hanampy amin'ny famoronana fanamarihana ara-dalàna mety alohan'ny hanompoana ny mpifaninana aminao.
Ity ny fomba fizotrany:
Manomboka amin'ny fivoriana ara-dalàna momba ny telefaona, amin'ny Internet, na ao amin'ny birao izay mamaly ny fanontanianao ary manome toro-hevitra ny mpisolovava. Vantany vao azon'ny mpisolovava ny antontan-taratasy rehetra momba an'io raharaha io dia hiresaka momba anao ny toe-javatra ary hanoro ny hetsika tsara indrindra.
Ny mpisolovava anao dia hamoaka fanamarihana ara-dalàna ary handefa izany aminao hijerena sy hankatoavinao.
Raha ankatoavina, ny mpisolovava dia hanome ny mpifaninana aminao ny fanamarihana amin'ny alàlan'ny mailaka, fax, na mailaka.
Ny tombontsoan'ny mpisolovava-mpanjifa dia miaro izay fampahalalana sy antontan-taratasy zarainao amin'ny mpisolovava anao.
Na dia tsy ny toe-javatra rehetra aza dia mitaky fanamarihana ara-dalàna, na izany aza, alefan'ny mpisolovava amin'ny fanantenana fa voavaha ny fifamaliana eo amin'ny mpanjifany sy ny mpifaninana tsy misy raharaham-pitsarana. Ny fandefasana fanamarihana ara-dalàna dia mamela ny mpandefa hametraka ny fikasan'izy ireo hahatratra ny famahana ny olana amin'ireo mpandray azy nefa tsy misy olana amin'ny fizotran'ny fitsarana lava.
Afaka manampy anao izahay amin'ny fanomanana sy fandefasana fanamarihana ara-dalàna.
Ny fomba ara-dalàna amin'ny fanomezana fanamarihana